Kuhlungwa uZime woZime
Sebeqokiwe ozime abayishumi nanye abaphuma kuMasipala waseMzumbe abazoqhudelana kowonobuhle iQueen of High Schools. Lomcimbi wokuhlunga ozime obubanjelwe ehholo lomphakathi eSibanini ukhombise elikhulu isasasa elibonakele ngesibalo sezikole ezibambe iqhaza.
Izikole ezingenele kubalwa iFica, iSithokozile, uMthwalume, iZibonele, iNqolobane, iKhathi kanye noMgamule High School. Lomucimbi uhlose ukuthi lezizikole ziveze amakhono azo kowozime.
Amakhwela, ukukikiza kanye nehlombe beliqhuma phezulu sezingena esiteji izintokazi zinyathela sengathi ziyesaba zivezela amajaji ikhono lazo. Lomncintiswano ohlelwe iYonwaba Nathi ngokubambisana noMasipala waseMzumbe neHibiscus Coast, uMnyango wezokuPhepha nokuVikela uMphakathi uthole oxhaso kwaLove Life, Thami Express, Radio Sunny South, Ugu Youth Radio kanye neEYODO.
Loluhlelo lwenza omukhulu umehluko ukwelekelela onobuhle ngolwazi olunzulu ngendlela okumele baziphathe ngayo kulomkhakha. Ngaphambi kokuqala komcintiswano ozime bathole ithuba lenkulumo ngxoxo lapho bebelulekwa khona ngokuziphatha njengomuntu wesifazane osakhulayo. Ezihlokweni ebeziholwa uMnuz Khulekani Chiliza oqhamuka kwa Love Life, kuvele obala ukuthi izinkinga ezibhidlangile entsheni kubalwa uphuzo oludakayo, izidakamizwa, ucansi olungaphephile kanye nokukhulelwa kwentsha.
Ephawula ngomcimbi, uNksz Sthembile Nxumalo ophethe iYonwaba Nathi uthe, “Inhloso ngqangi yalomcimbi bekuwukuvulela intsha ikakhulukazi yasemaphandleni ukuba ithole amathuba okuzibonakalisa nokukhuphula ukuzethemba okuyithuba eliyimvelakancane ezindaweni zasemakhaya.” Uqhube wathi, “Sifisa ukwakha omama bakusasa abazohlonishwa umhlaba wonke futhi nathi siziqhenye ngabo.” “Njengoba isiZulu sisho ukuthi ligotshwa lisemanzi nathi sifisa ukuqiniseka ukuthi sibanikeza ulwazi besebancane ukuze bakhule bewuqonda kahle lomkhakha. Sikhethe baba yishumi nanye abazomela uMzumbe ngoba bakwazile ukuphendula imibuzo ngokuzethemba,” kuphetha okaZwide.
UNksz Eve Mseleku ophethe iEYODO uthe, “Iningi lentsha linawo amakhono. Loko ngizibonele namhlanje. Inkinga ukuthi ezikoleni abawatholi amathuba uma uqhathanisa nezikole zasemalokishini.” Abaphumelele bazodlulela kowamanqamu ozobanjwa mhlaka 30 August 2014, uGu Sports and Leisure.
Sebebonke abaphumelele bami kanje Thobeka Ngcobo - Mgamule High School
Nosizo Mbutho - Mthwalume High School
Mbali Mchunu - Mthwalume High School
Asanda Mhlangu - Mthwalume High School
Sthabile Khomo - Inqolobane High School
Leean Cele - Zibonele High School
Xolisile Ndlovu - Khathi High School
Nombuso Jili - Khathi High School
Siwelile Nyawuza - KwaFica High School
Slungile Malunga - KwaFica High School
Asanda Mwandla - KwaFica High School